Wholesale 600D Waterproof Trailerable Boat Cover Fit V-Hull Tri-Hull Fishing Ski Pro-Style Bass Boats Manufacture and Factory |XGEAR
600D Isingapindi Mvura Inotakurika Boat Kavha Yakakodzera V-Hull Tri-Hull Hove Ski Pro-Style Bass Boats
XGEAR 600D Polyester isina mvura uye anti UV yepasirese yakakodzera chikepe chivharo chakagadzirwa kubva kwenguva refu 600D mhinduro-dhayi jira rine kaviri PU coating, iyo yakakwirira ruvara kukurumidza inopa yakanyanya mamiriro ekunze uye kukuvara kwekudzivirira.Kune akawanda marudzi ehukuru hwekuenderana nehukuru hwakasiyana hwechikepe.
Ruvara:KUREDZA GUVI/ GUVA
●ZVINHU ZVAKABADZWA:Iyo XGEAR chikepe inovhara inorema basa isingapinde mvura inovakwa ne600D inorema marine giredhi giredhi polyester jira rine urethane yakavharwa.Yakanakira kuchengetedza kwenguva refu uye nzira huru yekufamba.
●PROFESSIONAL DESIGN:Misona yakasonwa yakapetwa kaviri ine tambo yakasimbisa yakakura kuderedza mvura ichipinda kubva pakusonanidzwa.Inogona kupa kuchengetedzwa kwekuwedzera kwezvikamu zvakakosha nekuwedzera kwekudzivirira kwekudzivirira pamakona ekumashure, pakati uye mberi.Iyo yemukati mwando iri nyore kupukunyuka nekuda kwemaviri kumashure emhepo mavhavha.Kune zvakare mutsara unoratidzira kupa kuwedzera kuoneka uye kuchengetedzeka.
●ZVINYORE KUSHANDISA:Huya nepasuru yematambo uye mesh yekuchengetedza bhegi.Elastic tambo muzasi hem inopa kusimba kwakasimba.Kurumidza kuburitsa mabuckles uye tambo system inovimbisa kukwana nyore.Yakakwana kune zvese trailer uye kuchengetedza.
● Kuti uvandudze kusapinda kwemvura uye kuwedzera hupenyu hwevhavha, tinokurudzira zvikuru kushandisa mapango ekutsigira kudzivirira kusangana kubva mumvura pakati pekavha.
Chete Model C ine cutout dhizaini yemabhodhi ekunze.Model A/B/D/E/F/G/H yezvose zviri kunze uye mukati.
Nzira yekuyera sei Boat Rako:
1. Mera Beam Width: Yera mutsetse wakatwasuka kubva padivi panzvimbo yakapamhama pane hull.
2. Measure Center Line Length: Chiyero chakatwasuka chinobva kumusoro kweuta kusvika kunzvimbo iri kure yekumashure yaunoda kuvhara, iyo isingasanganisire mota.
Asi ndapota ita shuwa kuti inosanganisira kushivirira kune yakawandisa bow njanji kureba, kutsika mota, manera, uye transom mapuratifomu etc. Usayera kumusoro nepamusoro pe windshield, chigaro, nezvimwe.
3. Tarisa saizi yedu chati: Sarudza yakanakisa saizi yakavharwa kune yako chikepe urefu uye hupamhi.
Famba Kumusoro kune Inotevera Saizi kana kuyerwa kwako kuchiwira pahurefu hwakanyanya!
Kurudziro:Zvingave nani kushandisa Boat Cover Support Pole kuti uwedzere hupenyu hwevhavha yechikepe chako nekudzivirira mvura kuti isaungana pamusoro.
Iyi 600D Polyester isingapindi mvura inotakurika inomhanya bhoti inorema inovhara inokodzera v-hull tri-hull hove ski pro-style bass mabhoti ane saizi yakazara.Zviri nyore kushandisa:
1. Hoko kumberi kwebutiro pamusoro pemhino yechikepe.
2. Isungirire ichitenderedza furemu yetirailer uye isa bhagi.
3. Simbisa mabhanhire zvakachengeteka uye sunga bhanhire rakawandisa.
4. Danho rekupedzisira: ongorora chivharo chose.
Zvakapfuura: 8-ply Professional Heavy Battle Rope uye Weaving Tambo Yekudzidzira Kurovedza
Zvinotevera: XGEAR 2 mu1 Foldable Camping Lounge Chair ine Detachable Side Tafura yeCamping Fishing Beach uye Pikiniki.